On March 20, 2021, waxaan u dabaaldegi doonaa, sida sannad kasta tan iyo 1988, ah Maalinta Caalamiga ah ee Francophonie. Dabaaldeggan wuxuu isu keenayaa 70 gobol oo ku wareegsan qodob guud: luuqadda Faransiiska. Maaddaama aan nahay kuwa jecel luqadeed wanaagsan, tani waa fursad aan ku siin karno waxoogaa yar oo ku saabsan isticmaalka luqadda Faransiiska adduunka oo dhan. Goobtee Francophonie degan tahay 2021?
La Francophonie, maxay dhab ahaan tahay?
Had iyo jeer ay soo bandhigaan aqoonyahanno luqadeed iyo siyaasiyiin, ereyga Francophonie ayaa tilmaamaya, sida ku xusan qaamuuska Larousse, " dhammaan waddammada wadaaga isticmaalka, guud ahaan ama qayb ahaan, luuqadda Faransiiska. "
Haddii luuqadda faransiisku noqotay 1539 luqadda rasmiga ah ee maamulka Faransiiska, haddana kuma ekaanin oo keliya xuduudihiisa juqraafiyeed. Barta barroosinka dhaqameed ee fidinta gumeystaha Faransiiska, luqadda Molière iyo Bougainville ayaa ka gudubtay baddaha, si ay halkaas ugu horumariso qaab polymorphic ah. Hadday ahaan lahayd qaab ahaan suugaan, af, hadal sarbeeb ama lahjad ahaan (iyada oo loo marayo patoiskeeda iyo lahjaddeeda), Francophonie waa koox xiddigeed xagga luqadda ah, noocyadeeda kala duwani waa sharci midba midka kale u leeyahay. A…
Meeshee Francophonie ka degtaa adduunka sanadka 2021? Febraayo 4, 2021Tranquillus
READ Oktoobar 12, 2020 Kordhi mustaqbalkaaga xirfadeed ee CEP Markaad eegto cawaaqibka dhibaatada caafimaad ee suuqa shaqada taas oo sababi karta kororka dib-u-tababbarka iyo dhaqdhaqaaqa, talobixinta horumarinta xirfaddu waxay umuuqataa mid muhiim ah.
horeWaxaan rabaa inaan tababaro, laakiin xagee laga bilaabayaa?
socdaMaxaa looga bartay Shiinaha?